हामीलाई का’रबाही गर्ने प्रचण्डको है’सियत के छ ?’:: Mero Desh
हामीलाई का’रबाही गर्ने प्रचण्डको है’सियत के छ ?’
Published on: २७ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०३:१३
काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक कदमलाई साथ दिँदै माओवादी केन्द्रबाट एमालेतर्फ लागे का चार जना नेता बिहीबार सांसद पद खारेजीसँगै मन्त्री बाट पदमुक्त भएका छन् । २०७४ सालको चुनावबाट निर्मि त प्र’तिनिधिसभामा दल त्याग गरेको आधारमा प्र’त्यक्ष नि’र्वाचित सांसदको पद गएको यो पहिलो घ’टना हो ।
माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली ४ बाट नि’र्वाचित लेखराज भट्ट, रौतहट ३ बाट नि’र्वाचित प्रभु साह र कैलाली ३ बाट निर्वाचित गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद गुमेको हो  ।
सांसद पद गुमेसँगै मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका चारै जनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद नभएको व्यक्ति पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने सं’वैधानिक प्रावधान अ’न्त र्गत मन्त्रीमा पुनर्नि’युक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् ।
यो का’रबाहीको औ’चित्य छ जस्तो लाग्दैन मलाई का’र बाही गर्न प्रचण्डले जिताएको हो र  ? म त दुई पार्टीको एउटै घो’षणापत्र देखाएर नि’र्वाचित जनप्र’तिनिधि हुँ  । माओवादीले का’रबाही गर्ने है’सियत के छ ? त्यसैले यो नि’र्णय वि’रुद्ध कानुनी रूपमा लड्न तयारी गरिरहेको छु । प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने यो नि’र्णयले देखायो ।
लो’कतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानुनी है’सियतअनुसार हामीलाई का’रबाही गर्न मिल्दैन ।मौका मिल्दा प्रचण्ड कति सम्म गिर्दा रहेछन् भन्ने यसले देखाउँछ ओलीलाई नि’रकुंश, प्र’तिगमन गर्‍यो भन्छन् तर प्रचण्डले मौका पाउँदा लोक तान्त्रिक वि’धिविपरीत जनप्र’तिनिधिलाई मानौं आफैंले जिताएको हो जस्तो हठ राखेर का’रबाही गरेका छन्   !लो’कतन्त्र र जनताको कदर
उहाँसँग २९ वर्षसम्म स’हकार्य गरें । जनयुद्ध, शान्ति प्र’क्रि याको काममा स’हकार्य गरें ।उहाँसँग जो–जो नजिक भएर काम गर्नुभयो, मोहन वैद्य, रवीन्द्र श्रेष्ठ, विप्लव, सीपी गजु रेल, गोपाल किराती, बाबुराम सबैले छाडे । हामीले अन्त्य मा छाड्यौं इतिहास बोकेका, पार्टीका लागि लडेका यो’द्धा हरूकै का’रण शान्ति प्र’क्रियामा आइसकेपछि माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो ०७० को नि’र्वाचनमा तेस्रो पार्टी भयो ।
पछिल्लो चरणमा एमालेसँग मिलेर नि’र्वाचनमा गयौं !पार्टी एकता गर्‍यौं  एकतापछि विचार, राष्ट्र, जनता, योजनाविधि प्र’क्रियामा उहाँलाई चिन्ता भएन । उहाँलाई केवल पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको मात्रै चिन्ता भयो । उहाँ चरम म’हत्त्वाकांक्षी भएको पाएँ  । पद र प्र’तिष्ठामा मात्रै केन्द्रित हुनुभयो योग्यता, पार्टीमा लगानी गरेका मान्छेहरू को सट्टा उहाँ अवसरवादी र टपरटुइयाँहरूको घेराबन्दीमा पर्नुभयो पार्टीलाई एकतातर्फ अघि बढाउनेभन्दा पनि फुटा उनेतिर लाग्नुभयो ।
प्रचण्डले अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको ने’तृत्व गर्न सक्नु हुन्न  उहाँ एकताबाट टाढिएर जानुभएको हो । हामी त एक तातिरै छौं । पहिला एमालेसँग नमिल्दा पनि मैले दुईपटक चुनाव जितेकै थिएँ नि ! ओलीतिर लाग्नुमा मेरो केही स्वार्थ छैन ।अब माओवादीको के भविष्य हुन्छ ? चुनावले नै देखा उँछ । ०६४ को चुनावमा पहिलो पार्टी भयो, ०७० मा तेस्रो भयो ।
०७४ को चुनावमा एमालेसँग स’हकार्य नगरेको भए माओ वादीको अवस्था के हुन्थ्यो ? अबको चुनावमा प्रचण्ड र ओलीको है’सियत के हुन्छ ? थाहा भइहाल्छ । उहाँले केही आस देखाउनुभएको छैन । हामीले मन्त्री, सांसद भन्ने कुरा गौण ठानेका छौं । विचार, योजना राम्रो भयो भने सांसद पद आइरहन्छ । सांसद, मन्त्री भइन्छ कि भइँदैन भन्ने कुरा धेरै गौण हो ।
विचार योजनामा जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने भएकाले हामीलाई केही चिन्ता छैन कानुनी बाटो खोज्छौं । प्रचण्डको यो हर्कत जनताले राम्रै गरी बुझ्छन् भन्ने लाग्छ । प्रचण्डको नियत के हो ? भन्नेमा सीमित मान्छे लाई भ्र’म थियो, त्यो पनि अब टुट्छ । स्रोत कान्तिपुर